Boils (အနာစိမ်း/သွေးစုနာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Boils (အနာစိမ်း/သွေးစုနာ)
Boils (အနာစိမ်း/သွေးစုနာ) ကဘာလဲ။
အနာစိမ်းဆိုတာ ပြည်ပုပ်တွေပြည့်နေတဲ့ အရေပြားပေါ်က အနာဖုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စင်စစ် တွင် အရေပြားပေါ်ရှိ အမွေးအိတ်ကလေးများ ပိုးဝင်ရာမှဖြစ်တယ်။ အနာစိမ်းသည် မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ချိုင်း၊ တင်ပါးနဲ့ပေါင်ကဲ့သို့သော ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အနာစိမ်း တစ်ခုထက်ပို၍ ပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းသောရောဂါမဟုတ်ပါ။ ကုသပျောက်ကင်းနိုင် ပါတယ်။
Boils (အနာစိမ်း/သွေးစုနာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် တခြားရောဂါအရင်းခံတစ်ခုနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်တယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိဖို့ အတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Boils (အနာစိမ်း/သွေးစုနာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အနာစိမ်းသည် ၁.၅မှ ၅ စင်တီမီတာအချင်းရှိသော သေးငယ်၊ နာကျင်သော အဖုကလေး တစ်ခုမှစ ဖြစ်တယ်။ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ခါး၊ ပေါင်ခြံ၊ ချိုင်းနဲ့ တင်ပါးဆုံကြားတို့တွင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ သေးငယ်သော အဖုကလေးမှ တဖြည်းဖြည်းပိုကြီး ပိုနာသောအဖုကြီးအဖြစ်ရောင်လာနိုင်ပါတယ်။
တချို့အနာစိမ်းများသည် အရေပြားအောက်နက်နက်တွင် မြှုပ်နေရာမှ ပေါ်ထွက်လာပြီး သွေးနဲ့ အဖြူအရည်များ ပေါက်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်ပေါက် ထွက်သွားပြီးနောက်တွင် နီရဲရောင်ရမ်း နာကျင်ခြင်းများ သက်သာသွားသော်လည်း ရက်ပေါင်းများစွာ၊ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ရှိနေနိုင်ပါသေး တယ်။ နောက်ဆုံးအမာရွတ်ပင် ကျန်နေခဲ့နိုင်ပါတယ်။
စောစီးစွာမကုသရင် အနာစိမ်းသည် သွေးကြောမှတစ်ဆင့် နီးစပ်ရာ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများသို့ ပိုးမွှားများ ကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ အခြားသော လက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးစရာရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင် ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်ဆီမှာ အောက်ပါလက္ခဏာများရှိနေရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
မျက်နှာတွင် အနာစိမ်းပေါက်နေပြီး အနှောင့်အယှက်ပေးနေလျှင်
လက္ခဏာများ ပို၍ဆိုးဝါးလာပြီး မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်လျှင်
အနာစိမ်းသည် ၅ စင်တီမီတာ ထက်ပိုကြီးလျှင်
အနာစိမ်းသည် (၂)ပတ်အတွင်း မပျောက်ကင်းလျှင်
အနာစိမ်း ထပ်ခါ ထပ်ခါပေါက်နေလျှင်
Boils (အနာစိမ်း/သွေးစုနာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အရေပြားပေါ်ရှိ အမွေးအိတ်လေးများ ဘတ်တီးရီးယား ပိုးဝင်သောအခါ အနာစိမ်းဖြစ်တတ်ပါ တယ်။ အဖြစ်အများဆုံး ဘတ်တီးရီးယားပိုးကတော့ Staphylococus aureus (အရေပြားနဲ့ နှာခေါင်း ထဲတွင် အတွေ့များသည်) ဟုခေါ်သော ပိုးမွှားပဲဖြစ်တယ်။ အနာစိမ်းသည် အမွေးအိတ်လေးမှ စဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရေပြားတွင်း ပိုနက်သောအလွှာထဲသို့ ကူးစက်စေပါတယ်။ ပိုးဝင်နေသော အနာစိမ်း ပြည်ပုပ်များနဲ့ ထိတွေ့မိသော သူများကိုရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ တချို့အခြေအနေများတွင်ကုတ်ခြစ် ရာသို့မဟုတ် အင်းဆက်အကိုက်ခံရသော အရေပြားပေါက်ပြဲအနာလေးမှ အလွယ်တကူ ဘက်တီးရီး ယားပိုးဝင်ကာ အနာစိမ်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အခြားအကြောင်းရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် အလှကုန်များနဲ့ မကြာခဏထိတွေ့ရခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်ခုခံအားစနစ် အားနည်းစေသော ရောဂါများ (ဥပမာ – ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အရက်အလွန် အကျွံသောက်ခြင်း)သည် အနာစိမ်း ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အနာစိမ်းသည် ပိုမိုဆိုးဝါးလာရင် သွေးတွင်း ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ကာ ဆိုးဝါးသောအခြေအနေ များပင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Boils (အနာစိမ်း/သွေးစုနာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အနာစိမ်းသည် ကျန်းမာနေသော လူအပါအဝင် မည်သူမဆိုတွင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကတော့ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေပါတယ်။
အနာစိမ်းပေါက်နေသူနဲ့ တရင်းတနှီး ထိတွေ့ဆက်ဆံမိခြင်း။
ဆိးချိုရောဂါ – ဒီရောဂါဟာ ခန္ဓါကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကို အားနည်းစေတယ်။ ထိုကြောင့် ခန္ဓါ ကိုယ်မှ ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ ပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်။
အရေပြားအခြေအနေ ။ ။ ဝက်ခြံနဲ့ နှင်းခူးကဲ့သို့သော အရေပြားရောဂါများရှိလျှင် အနာ စိမ်းပိုပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ထိုရောဂါများသည် အရေပြား၏ ကာကွယ်ရေးအလွှာများကို ဖျက်ဆီး သောကြောင့် အနာစိမ်းပေါက်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းခြင်း ။ ။ HIV ကဲ့သို့သော ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းသောရောဂါ များသည်လည်း အနာစိမ်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေပါတယ်။
Boils (အနာစိမ်း/သွေးစုနာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ဆရာဝန်သည် ပိုးဝင်နေသောအရေပြားကို စမ်းသပ်ပြီး ပြည်အရည်နမူနာယူ၍ ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ရောဂါအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
Boils (အနာစိမ်း/သွေးစုနာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အနာစိမ်းသည် အချိန်ခဏတာ ယားယံ၊ နာကျင်ပြီး အလိုအလျောက် ပျောက်သွားတာလည်းရှိ တတ်ပါတယ်။ ဆိုးဝါးသော ကိစ္စများတွင်တော့ အောက်ဖော်ပြပါ ကုသနည်းများကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။
အနာကိုဖွင့်ပြီး ပြည် ကိုထုတ်ရမယ်။ အနာစိမ်းဖြစ်ပြီး(၂)ပတ်အတွင်း ပြုလုပ်တယ်။
မပြင်းထန်သော အခြေအနေများအတွက် အိမ်တွင် သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
စိုစွတ်၊ ပူနွေးသော အဝတ်နဲ့အနာစိမ်းပေါ် တစ်နေ့တွင် အကြိမ်များစွာကပ်ခြင်းသည် အနာစိမ်းပေါက်ထွက်ရန်အားပေးတယ်။
အနာစိမ်းကို အိမ်မှာဘယ်သောအခါမှ ညှစ်ခြင်း၊ လှီးထုတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနဲ့။ ပိုးဝင် စေနိုင်ပါတယ်။
အနာစိမ်းပေါက်သွားရင် စိုစွတ်၊ ပူနွေးသော အဝတ်နဲ့ ဆက်ပြီး ကပ်ပေးပါ။
ပြင်းထန်အဆင့်အခြေအနေတွင် ကြီးမားပြီး နက်သော အနာစိမ်းများကို ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။
ဆိုးရွားစွာ ပိုးဝင်နေသော အနာစိမ်းများအတွက် သင့်ဆရာဝန်သည် ပိုးသတ်ဆေး ညွှန်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အခြေအနေချင်း မတူညီနိုင်ပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်း လမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေ အသုံးပြုခြင်းက အနာစိမ်းကို ကုသရာမှာ ဘယ်လို အထောက်အကူပြုနိုင်သလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် အနာစိမ်းကို ကုသတဲ့ နေရာမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ပိုးသတ်ဆေးသောက်ပါ။
• အနာကောင်းကောင်း ကျက်သွားတဲ့အထိ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားကို လျှော့လုပ်ပါ။ တတ်နိုင်သလောက် ချွေးမထွက်အောင်နေပါ။
• အရေပြားကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
• ရေနွေးပတ် ကပ်ပေးပါ။ အနာစိမ်းပေါက်အောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။
• ဘယ်သောအခါမှ အနာစိမ်းကို မညှစ်ပါနဲ့။ ပိုးဝင်တတ်တယ်။
• အဝတ်အစားများနဲ့ အိမ်ရာခင်းများကို နေ့စဉ်လဲပြီး ရေနွေးနဲ့လျှော်ပါ။
• ဖျားနာလျှင် သို့မဟုတ် ဆေးကုသမှုခံယူပြီး (၃)၊ (၄)ရက်ကြာသော်လည်း မသက်သာလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြပါ။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Bảntải về
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 12, 2017